Umbuso Wokumaketha Okuqukethwe Kwamaselula | Martech Zone
Isimo Sokumaketha Okuqukethwe Kwamaselula
NgoMsombuluko, Februwari 18, 2013 NgoMsombuluko, Juni 8, 2015 UJenn Lisak Golding
Ngabo bonke ubuchwepheshe obutholakalayo manje, okuqukethwe kudliwa ngezindlela eziningi ezahlukahlukene nakumadivayisi amaningi ahlukene. Ngenkathi ama-desktops namaphilisi kungabadlali abakhulu kulo mdlalo, amadivayisi eselula abonakala enethonya elikhulu ekuchofozeni amazinga kanye nokuphequlula. Ku-2013, ukumaketha kokuqukethwe kwamaselula kuzokhiqiza inzuzo enkulu ekutshalweni kwemali uma kwenziwe kahle.
Siqoqe ucwaningo kusuka ku- yesikhulumi sokubloga ezinkampani iklayenti, i-Compendium, ne- isoftware yokuthengisa ye-imeyili iklayenti, i-ExactTarget, ukukhombisa umthelela wokumaketha kwamaselula kule minyaka embalwa eyedlule nalokho okusazokuza. Lapho yonke idatha ihlanganiswa, kube khona okutholakele okushaqisayo:
Amanani avulekile kumadivayisi eselula enyuke ngo-300% kusukela ngo-Okthoba 2010 kuya ku-Okthoba 2012.
I-imeyili yeselula idala ukuguqulwa okuphindwe kabili kunokwenzelwa umphakathi noma ukusesha.
Iselula kungenzeka ingasho ukuthi “usohambweni.” Abasebenzisi beselula abangama-51% base-US baphequlula, bacinge futhi bathenge kumadivayisi eselula ekhaya.
Ukuvakashelwa iwebhu kuselula noma kuthebhulethi kuphakeme kakhulu ngoLwesine ku-15.7%.
Ukuthumela imiyalezo nge-SMS sekuya ngokuya kwanda, njengoba ama-ejensi angama-31.2% asebenzisa leli qhinga ukwandisa ukuchofoza.
Siyini isimo sokumaketha kokuqukethwe kwamaselula? Ngena kumdlalo, noma ulahlekelwe yithuba lokuchofoza ukudlula, ukuguqulwa, nokuzibandakanya.
Tags: ukukhulumisanaukumaketha kokuqukethwe kweselulaAmadivayisi eselulaukumaketha i-smsImiyalezo yokuthengisa ye-SMSTablets
Isikhathi esivulekile se-imeyili phakathi kokushintshwa kweselula nedeskithophu siyathandeka! Kubonakala sengathi sifinyelela esikrinini sethu esikhulu ekuseni kodwa bese siqala kancane ukubuyela kuselula. Hewu!
Iqiniso kakhulu, uDoug. Ngimangazwe futhi ukuthi sisebenzisa kangakanani iselula ukuphequlula (hhayi ama-SMS kuphela) ekhaya.
Sawubona Jenn, ezinye izibalo ezithokozisayo lapha, ziyayithanda. Ngabuza umbuzo mayelana nalokhu kwa-SES london ngonyaka odlule, ngakho-ke zibuze ukuthi uthini umbono wakho / ukuphawula kwakho:
Noma ungabona ukuthi ukuguqulwa kuphezulu kumadivayisi weselula wokuthenga ne-ecommerce, ngiyazibuza ukuthi izibalo zibukeka kanjani ukuthi mangaki avula / afunde i-imeyili kodwa aguqule kudeskithophu, ngakho-ke usebenzisa amaphuzu amaningi wokuthinta ukuguqula (futhi kwenze kube nzima ukulandelela?). Cheers - URussell
Sawubona Russell! Siyabonga ngokuphawula kwakho. Ngicabanga ukuthi lowo ngumbuzo omuhle, futhi ngingasho ukuthi indlela engiziphethe ngayo ingakukhombisa lokhu (ngiyibuka kuselula, kepha ngithenge kwideskithophu).
Anginazo izibalo ezilusizo, kepha ngike ngabhekana nalo mbuzo ngaphambili. Nayi imicabango yami (ngaphezulu ngombono webhizinisi lezengqondo):
- Uma ukude nenduduzo yekhaya lakho noma edeskini, ngicabanga ukuthi ukuguqulwa kwidivayisi ephathekayo (ukuthenga) sekusezingeni eliphezulu. Sisesikhathini sokuzanelisa ngokushesha, futhi uma sikufuna, sikwenza manje. Uma singafuni ukuthenga ngaleso sikhathi nalapho, mhlawumbe sibekisa uphawu lokubekisa noma silondoloze ngandlela thile. Kodwa-ke, uma singayigcini njengesidingo esisebenzayo noma okumele sibe nayo, khona-ke sizokhohlwa futhi singaphinde sibuye ngaphandle kokuthi sihambisane namabhukhimakhi wethu noma sibe nesikhumbuzi. Iningi lamabhizinisi e-B2C anesikhumbuzo se-imeyili uma sifaka okuthile enqoleni yokuthenga, kepha ngingaqagela ukuthi uma singathenganga kuselula ngaleso sikhathi, mhlawumbe sizoyithenga kudeskithophu, noma, ngeshwa lomthengisi, ngeke sithenge nhlobo.
- Ngokombono wokulandela ngomkhondo, kulapho kungena khona ukumaketha okuzenzakalelayo. Kunamathuluzi akuvumela ukuthi ulandelele abathengi imikhuba yakho yokuphequlula futhi wakhe iphrofayili yekhasimende. Ukube bebeyikhasimende langaphambilini, lokhu kulula kakhulu ukukwenza. Kungaba nzima uma bengakahlukaniswa njengothemba kusistimu yakho.
- Ingabe amaphuzu amaningi wokuthinta enza kube nzima ukulandelela ukuguqulwa? Yebo. Impela. Kepha lokho kusho ukuthi akunakwenzeka? Cha - sidinga nje amathuluzi athuthukile nezinsizakusebenza ezinikezelwe ukuze kube nokuhamba komsebenzi okufanele. Lokhu kuyabiza, kepha ekugcineni kosuku, kuzosiza ekugcineni nokuthembeka.
Ngakho-ke, kukonke, cha, anginazo izibalo ekuguqulweni uma kuqhathaniswa nokuphequlula kuselula nethebulethi, bese kuguqulwa kudeskithophu, kepha ukulandela indlela yokuziphatha kwamakhasimende ngokusebenzisa ezentengiselwano kufanele kukusize lokhu. Ngiyabonga! Uma ungathanda ukuqhubeka nezingxoxo, sicela ukhululeke ukufinyelela ku-Twitter: @jlisak.